अर्बौ भ्र*ष्टाचारको पोल बाबुरामले खोलेपछि ओली-प्रचण्ड-देउवाको रुवाबासी! – Butwal Sandesh
On १ कार्तिक २०७७, शनिबार १४:१९ By Butwal Sandesh
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एउटा दावीले सत्ता र प्रतिपक्षलाई हल्लाएको छ। प्रसंग हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको। यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ। विना कुनै प्रतिस्पर्धा यो आयोजनालाई मोटो रकममा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको आ’रोप लाग्दै आएको छ।
यस्तैमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा सत्ता र प्रतिपक्षीले ९ अर्ब बाँडेर खाएको प्रमाण आफूसँग भएको खुलासा र दावी गरे। बाबुरामले प्रमाण नै छ भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हो’सहवास उड्यो। कांग्रेसले प्रमाणित गर्न बाबुरामलाई चु’नौती दियो। प्रचण्डले पनि दावी आधारहीन भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। अब ओलीले पनि बाबुरामको दावी निराधार भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
बाबुरामले उच्चस्तरीय जनलोकपाल बनाउन माग गर्दै तिनै नेताले ९ अर्ब खाएको प्रमाण दिन आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। आ’रोप मात्र नभई प्रमाणका आधारमा बोलेको बाबुरामले बताउँदै आएका छन्। प्रमाण छ भनेपछि ओली प्रचण्ड र देउवाको सातो गएको हो।
ओलीले त बाबुरामको दावीलाई झुठा देखाउन ठूलो स्वरमा खण्डन गरेका छन्। शुक्रबार प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बाबुरामले गैर जिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको आ’रोप लगाए। सरकारले भ्र’ष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको ओलीको भनाई छ। ओलीले बाबुरामलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु ।
यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो । तर हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं ।’ जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काउने र गलत बाटोमा लैजाने काम गर्न नसक्ने ओलीको भनाई छ।
PREVIOUS POST Previous post: असल जीवनसाथि खोज्दै हुनुहुन्छ भने यी चिजहरु अवस्य थाहा पाउनुहोला !
NEXT POST Next post: सेनासँगको दु*श्मनी ईश्वर पोखरेललाई पर्‍यो महंगो, बढुवा भनेर ओलीले खुवाए लोप्पा, अब सूर्य थापाकै हैसियतमा